UNWTO: Dalxiiska Barafka iyo Buurta wuxuu wajahayaa caqabad ah la qabsiga isbedelka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirka Warka Warshadaha » UNWTO: Dalxiiska Barafka iyo Buurta wuxuu wajahayaa caqabad ah la qabsiga isbedelka
Andorra Breaking News • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Sports • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Shirweynihii 10aad ee Adduunka ee Barafka iyo Dalxiiska Dalxiiska (Andorra, 21-23 Maarso 2018) wuxuu muujiyey baahida loo qabo in la waafajiyo hoyga dalxiis ee laga filayo macaamiisha maanta iyo in la kordhiyo tayada khibradda socdaalka, iyadoo la aqoonsanayo maareynta aqoonta iyo dhaqanka martigelinta inay yihiin furayaasha guul.
Shirweynahan oo ay si wada jir ah u soo qabanqaabiyeen toddobada wada-jir ee Mabaadi'da, Dawladda Andorra iyo Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO), Shirweynahani wuxuu ka kooban yahay gole joogto ah oo looga doodo horumarka iyo joogtaynta dalxiiska ee aagga buuraha.
In ka badan 400 oo kaqeybgalayaashu waxay kaqeybgaleen daabacaaddii tobnaad ee Shirweynaha, oo ay kujiraan kudhowaad soddon qof oo kahadlaya in kabadan 16 wadan iyo khubaro ka kala socda Spain, Mareykanka, Finland, France, Greece, Japan, United Kingdom iyo Switzerland, iyo kuwa kale oo badan.
Xiritaanka Shirka, Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili wuxuu carabka ku adkeeyay muhiimada ay leedahay meelaha loo socdaala ee buuraha in kaliya aan laga bixin jawaabaha dalabaadka isbedelaya ee socdaalayaasha, laakiin sidoo kale in la daboolo meelaha u dhexeeya "baahida loo qabo in la dhiso kaabayaasha dhaqaalaha iyo hoy waara, tayo leh tababar xirfadeed, iyo sidoo kale la dagaalanka xilliyada iyo in kheyraadka la wanaajiyo ”.
Gabagabadii doodahan oo socday muddo saddex maalmood ah, khubaradu waxay muujiyeen dhinacyo ay tahay inay calaamadeeyaan khariidadda loo raacayo qaybtan dalxiiska caalamiga ah:
• Qaybta dalxiiska ayaa ka soo baxday dhibaatadii oo gaadhay tiro aad u tiro badan oo dalxiis iyo dalxiis dalxiis oo ay qaadeyso tilaabooyinka lagama maarmaanka u ah in lagu daboolo astaanta macaamiisha ee sii kordheysa ee dalbashada iyo khibradda badan.
• Dijitalisnimada iyo caalamiyeynta ayaa u abuuray dalxiisayaasha dhaqanno iyo filashooyin aad uga duwan kuwa soo-booqdayaasha soo jireenka ah, sidaas darteedna looga baahan yahay in alaabooyinka loo waafajiyo isbeddellada laga filayo dhinaca dalabka.
• Dhinacyada qaarkood ee dhinaca saadka waa in la sii wanaajiyaa, iyadoo maanka lagu hayo in tayada khibrada soo booqdeha ay tahay udub dhexaadka u ah horumarkan.
• Awood u siinta inay bixiso hudheello, dalcadaha barafka iyo goobaha dalxiiska ee qanciya dalxiisayaasha ayaa ka mid ah dhinacyada dammaanad qaadaya guusha buur loo socdo. Laakiin waxaa jira arrimo kale oo ku lug leh, sida maaraynta aqoonta, tayada adeegyada iyo dhaqanka soo dhaweynta.
• Tababbarka jaamacadaha iyo waaya-aragnimadooda ayaa lagu dabakhi karaa waxqabadka dalxiiska, iyada oo tan laga hadlayona, kormeerid iyo daraasado cilmi-baaris oo laga sameeyay meelaha loo dalxiis tago ayaa gacan ka gaystay horumarinta deegaanno waara.
• Barmaamijyada cusub ee dhijitaalka ah waa inay siiyaan kalsooni iyo kalsooni milkiileyaasha iyo martida labadaba. Aagga xeerarka hoyga, Andorra waxay soo bandhigtay sharcigeeda cusub waxayna muujisay shanta ujeedo: ka jawaab celinta dabeecadaha cusub ee macaamiisha, hagaajinta sinaanta kooxaha hoyga, yareynta howlaha aan sharciyeysnayn iyo fududeynta sharciyeynta hoyga sharci darrada ah, iyo hagaajinta tayada iyo nabadgelyada martida . Intaa waxaa dheer, Andorra waxay soo bandhigtay sumcad khadka tooska ah markii ugu horreysay iyada oo ah shuruudo cusub oo loogu talagalay kala soocidda hoyga.